Gingde blọgụ maka azụmahịa: Usoro ọhụrụ maka nkịta ochie | Martech Zone
Ọ dịghị onye nwere ike ịrụ ụka kpam kpam nchịkwa nke blọọgụ na ewu ewu na, n'aka nke ya, ogo njin njin. Ihe ewu ewu nke blọọgụ sitere na usoro nkwukọrịta ọhụrụ a nke gbanwere na web - nke nwere ike ime ka ọ dị mma, nke na-adịchaghị mma na ezigbo.
Technorati na-enyocha ihe 112.8 nde blọọgụ n'oge a na - eme ọtụtụ puku blọọgụ kwa awa. Mepee ngwa ngwa dika WordPress, Blogger, ma ọ bụ Typepad na Vox mee ka ịde blọgụ dị mfe. Na ụlọ ọrụ ọ bụla, ọ bụrụ na ọ bụghị ngalaba IT ọ bụla, ị ga-ahụ ọ dịkarịa ala otu onye na-ede blọgụ. Ọ dị mfe:
Dee + Bipụta = Blog?
Ọ dị mfe, nri? Nke ahụ bụ kpọmkwem ụzọ ndị na - ahụ maka ịre ahịa na - esi emeso anyị mgbe anyị banyere n’otu nzukọ ma tụlee ịde blọgụ dịka akụkụ nke usoro atụmatụ azụmaahịa niile. Lọ ọrụ na-atụle ịde blọgụ dị ka ọ bụ ihe dị na ndepụta ndepụta 2008. Jụọ ụlọ ọrụ ma ọ bụrụ na ha blọọgụ na ị ga-enweta iwu "yup". Ọ bụrụ na ha nwere, jụọ ha ihe ikpo okwu ha na-achọ na ha na-aza na ihe ọ bụla nke “free”.
Ọ dịghị mfe
Ọ bụrụ na ịde blọgụ ụlọ ọrụ dị mfe, gịnị kpatara ọnụọgụ blọọgụ ji agbada? E nwere ihe ole na ole kpatara ya:
Mkparịta ụka siri ike anaghị adọta ndị na-agụ akwụkwọ.
Blog blọọgụ ghọọ regurgitated pịa mbipụta.
Isiokwu ndị ahụ anaghị akpali ihe ma ọ bụ trackbacks.
Ederede enweghị mmadụ ma chee echiche onye ndu.
Na nkenke, ihe kpatara blọọgụ azụmahịa na-ada ada bụ n'ihi na ụlọ ọrụ na-anọchi usoro ntinye akwụkwọ maka usoro njikwa ọdịnaya ha.
Ulo oru ahia choro enyemaka!
Enwere igodo abuo maka ịde blọgụ nke ọma na azụmaahịa anaghị eleghara anya:
Ihe ikpo okwu nke kwadoro usoro.
Onye ọ bụla IT nwere ounce nke uche nwere ike ịtụba WordPress na sava ma nye onye isi ọrụ nbanye. Nke a bụ ụzọ eji eme ihe iji gbaa mbọ hụ na obere azụmaahịa azụmaahịa azụmaahịa gị. Ọ dị ka ịpụ na ịmalite azụmaahịa ahịhịa n'ihi na ị chọpụtala etu ị ga-esi bido lawnmower gị.
Inweta ikike na nsonaazụ njin ọchụchọ chọrọ nyocha kpụ ọkụ n'ọnụ nke azụmahịa gị, ndị na-asọmpi ya, ntanetị ya ugbu a na ebe ị ga-achọ.
Imejuputa usoro ikpo okwu nke na-eduzi blọgụ na-agbasi mbọ ike site na usoro mgbasa ozi, na-enyere onye na-ede akwụkwọ aka na-arụ ọrụ nke ọma ka o mepụta ọdịnaya kachasị mma, weeziezie na-ahazi ọdịnaya ahụ maka nsonaazụ ọchụchọ kachasị (kpebiri na nyocha mbụ na atụmatụ) bụ isi ihe na-aga nke ọma azụmaahịa azụmaahịa.
De blọgụ abụghị ihe ịga nke ọma n'abalị. Nsonaazụ ịde blọgụ dị oke mkpa chọrọ nyocha na nyocha oge niile. Site na ịde blọgụ azụmahịa, m ga-agbakwa otu ìgwè ume ebe ndị otu na-eme ka ndị folks na-emezu atụmatụ na usoro.
Achọghị ọdịnaya ma ọ bụ kwado ya site na ire ahịa. Ọ bụrụ na e nwere dull mkparịta ụka a ga-enwe, ọ bụ mgbe ruru ka ọcha nnukwu nwanne.
Strategy + Dee + Bipụta + njikarịcha = Blog Blog!
M hụrụ WordPress n'anya na blọọgụ a agaghị agbanwe site na ikpo okwu ntanetị. Agbanyeghị, nke ahụ apụtaghị na WordPress bụ ezigbo azịza. On my 'Mepụta New Post' ihuenyo, ọ dịghị ihe na-erughị 100 nhọrọ… mkpado, edemede, ọnọdụ, edemede, trackbacks, comments, pings, paswọọdụ nchebe, omenala ubi, post ọnọdụ, ga-eme n'ọdịnihu posts…. rie ude. Tụfuo ihuenyo a n'ihu onye ọ bụla, ọ na-atụkwa ụjọ!
Azụmaahịa gị ekwesịghị ịkụziri ndị ọrụ otu esi eji nyiwe ịde blọgụ. Ga-enwe ike ịbanye nbanye, biputere ma bipụta ya. Kwe ka ngwa ahụ mee ihe ndị ọzọ!
Nke a bụ otu ihe atụ nke atụmatụ dị egwu ị ga-ahụ Compendium Blogware, ngwá ọrụ iji nyere onye edemede ahụ itinye uche na isi okwu na ahịrịokwu n'ime post ya ka o nwee ike iji ngwa nyocha were ya.
Ọ bụrụ n’ide obere ma ọ bụ ọtụtụ mkpụrụokwu na ahịrịokwu, akara gị ga-ada! Ọ bụ ngwa ọrụ na-adọrọ adọrọ nke enyi, PJ Hinton dere. A dụrụ ndị ode akwụkwọ ọdụ ka ha dee maka onye na-agụ ya, mana ha nwere ike nweta ya na nnukwu isiokwu njupụta na akụrụngwa dị ka nke a.
Ngwá ọrụ dịka Compendium na-abịa na otu ndị ọkachamara na-enyere gị aka iwulite atụmatụ ahụ, yana ngwa nke na-enyere gị aka imezu atụmatụ ahụ. Chọghị onye IT gị ka ị banye! Ọ bụrụ n’ịchọghị ịhụ blọgụ azụmaahịa gị gbadara ọkpọkọ ahụ, chọta ndị ziri ezi ma nweta ngwa ọrụ eji arụ ọrụ.
Enwere m obi ụtọ nke nleta kọfị na Chris Baggott n'ụtụtụ a (ọ na-ezigara banyere nchọpụtaForrester na ịde blọgụ, kwa.
Ngwakọta is na-arụ ọrụ - itinye uche n'ihe na ịnya okporo ụzọ maka azụmaahịa ndị debanyere aha. Ndị na-agụ akwụkwọ na-arụ ọrụ ma na-alaghachi - azụmaahịa na-eto site na nsonaazụ. Ọ bụ oge na-atọ ụtọ maka ụlọ ọrụ ahụ na ọnọdụ Compendium dị iche na nke ndị Forrester hụrụ.
Nkwupụta zuru oke: Abụ m onye nketa na Compendium ma soro Chris na Ali rụọ ọrụ n'oge mbido. Compendium bu ihe omuma na mkparita uka na mgbe ahu, ma Chris na ndi ozo emeela ka mkparita uka ahu buru ulo oru! Ọ bụghịzi echiche, ọ bụ ngwa na-agbanwe ịde blọgụ azụmahịa.
Tags: ịde blọgụ maka azụmahịaụlọ ọrụ ịde blọgụteknụzụ
Jul 24, 2008 na 12:26 PM
Blọọgụ azụmahịa nwere ike ịdata n'ihi na ndị nabatara oge mbụ amatabeghị otu ị ga-esi gbanwee ndị na-agụ blọgụ n'ime ndị ahịa, nsogbu nke ọtụtụ weebụsaịtị nwere. Ugbu a, ha na-anwale ngwaọrụ dị iche iche.
Echeghị m na a nwalela ịde blọgụ azụmaahịa ma, opekata mpe ọtụtụ ụlọ ọrụ nwere ike ịga nke ọma na ya. Nke ahụ bụ n'ihi na nnabata bụ ụdị nsogbu a.
Okwu nnabata na-egbochi ọtụtụ ụlọ ọrụ kacha mma ịde blọgụ. Companieslọ ọrụ ọha na eze ga-akpachara anya ịghara ịkwupụta nkwupụta ihu igwe nke nwere ike ịdọta ndị na-etinye ego n'ime ịzụta ngwaahịa ha. Companieslọ ọrụ nkeonwe nke ndị ọhụụ (nke nwere ike ịbụ ndị na - ede blọgụ kachasị mma) anaghị adị njikere isoro ndị asọmpi kerịta usoro echiche ha.
Ya mere, onye na-ekpe? Ndị ahịa ahịa na ụlọ ọrụ dị n'etiti etiti na-ezughi oke iji gaa ọha ma ọ bụ ọhụụ iji gbanwee ụwa. Nke a na-eduga na blọọgụ na-agwụ ike nke jupụtara na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ na pịa pịa.
Azịza ya? Ọfọn, m ka na-arụ ọrụ na nke ahụ. Inweta ndị ziri ezi ịde blọgụ adịghị mfe. Mana ozugbo ha malitere, nke a bụ ụfọdụ ndụmọdụ iji mee ka ọ dịkwuo mfe maka ndị na-ede blọgụ azụmaahịa iji mee ka ọkụ ahụ na-enwu:
1) nweta enyemaka. Onye isi oche nwere ike ịbụ onye ịchọrọ ịchọrọ na ntanetị nke blọọgụ, mana ọ ga - abụrịrị ihe kacha mkpa. Tinye onye ozo ka ijide n’aka ijide n’aka na edere ihe edere ma bulite ya.
2) mepụta kalenda ederede. Kpebisie ike ihe ị ga-ekwu tupu oge eruo, mee ka ọ gafee ndị ọrụ iwu ma mee ka ndị edemede gị rụọ ọrụ na posts.
3) dee ihe ndị ahịa gị chọrọ. Na-agwụ ike bụ n'uche nke onye na-agụ (ma ọ bụ anya nke onye na-ahụ ihe, ma ọ bụ ihe ọ bụla). Ọ bụrụ na ebumnuche blog ahụ iji gbakwunye atụmanya nke ụlọ ọrụ ahụ, ọ ga-adị mfe ịmegharị ndị na-agụ ya ndị ahịa.
Daalụ ọzọ maka nnukwu post.
Jul 24, 2008 na 12:35 PM
Daalụ Rick! Ndụmọdụ Pụrụ Iche. Daalụ maka iwepụta oge na nke a - ọ nwere ike ịba uru na akwụkwọ akụkọ ọcha, eh?
Jul 25, 2008 na 6:26 PM
Akwa post, dị ka ọ dị na mbụ.
Mana achọrọ m ịjụ, kedu ka ị siri bia ịmụ akwụkwọ Njirimara Compendium nke ị kọwara? Ndi onye ahia gi na eji ya? Ma ọ bụ Compendium na-akwado ọkwa a? Ọ bịara dị ka azụmahịa.
Mara na anaghị m ebo gị ebubo, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ọ bụ ụgwọ-maka-post m ga-echebara gị echiche nke ukwuu, mana m bụ naanị ịmata ihe dị ukwuu…
Jul 25, 2008 na 7:45 PM
Enweghị nchekasị n'ebe ahụ! Enyere m ụfọdụ nkwupụta na njedebe nke post - enyere m aka ịmepụta echiche mbụ nke Compendium na Chris Baggott na abụ m onye na-ekere òkè na azụmaahịa ahụ.
PJ Hinton bụ onye nrụpụta na Compendium yana (ọ bụ ihe ndabakọ) bụrụkwa onye 'fiend' nke Egwuregwu Bean ebe m dogoro. Anọ m na-agwa PJ banyere ụfọdụ echiche maka inyere blogger aka ka ọ na-ede ihe - PJ nyekwara m nghọta maka atụmatụ a nke ahapụbeghị.
Ali Sales wee bia n'echiche ma echere m na ọ na-egbuke egbuke.
Jul 25, 2008 na 6:35 PM
Doh! Maka ihe ụfọdụ, ahụghị m akụkụ “Ngosipụta zuru ezu”, agụrụ m ya na onye na-agụ RSS m ma n'ụzọ ụfọdụ atụfuru nke ahụ. Ndo maka ọkwa izizi.
Jul 25, 2008 na 7:46 PM
Nsogbu adighi, Mike! M ga-emeghe gị mgbe niile - ma nwee ekele maka ịbụ ndị a mara aka. Echere m na ọ bụ 'ọrụ m' dị ka onye na-ede blọgụ. Ọ bụrụ na m ga-ede okwu ahụ, ọ ga-akara m mma ịkwado ya!
Jul 31, 2008 na 5:52 PM
Gingde blọgụ bụ ụzọ dị egwu maka ụlọ ọrụ iji nweta ọtụtụ mmadụ. Ọ na-enye ụlọ ọrụ ahụ ohere igosipụta akụkụ dị iche iche nke azụmaahịa ha. Na mgbakwunye, ọ na - enyere aka ịbawanye ogo ha na igwe nyocha. N'ihi na ịde blọgụ bụ ụzọ dị mma iji jikọọ ndị ahịa gị yana iji mụbaa netwọkụ mmekọrịta gị, ị kwesịrị ịkpachara anya ma kwekọọ na ịde blọgụ gị.